Thierry Henry oo ku dhawaaday inuu macalin ka noqdo mid kamid ah kooxaha ingiriiska.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Thierry Henry oo ku dhawaaday inuu macalin ka noqdo mid kamid ah...
Tababaraha kooxda CF Montreal Thierry Henry ayaan noqon doonin macalinka cusub ee AFC Bournemouth ka dib markii kooxda heysata horyaalnimada ay xaqiijisay in tababaraha Jonathan Woodgate uu sii hayn doono inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Xiddigii hore ee Arsenal ayaa ku jiray orodka si uu u bedelo shaqada laga ceyriyay Jason Tindall waxaana uu kala hadlay Cherries suurtagalnimada inuu si lama filaan ah ugu laabto England isagoo ah tababarahooda xiga.
Laakiin wararkaas ayaa waxaa ka dhawaajiyay Bournemouth subaxnimadii Axadda markii ay ku xaqiijiyeen bayaan ay soo saareen in tababaraha ku meel gaarka ah ee Woodgate uu si fiican u qabtay si uu u sii haysto booskiisa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Madaxa xafiiska fulinta ee Bournemouth Neill Blake ayaa yidhi: Xirfadkiisa iyo hogaankiisa Jonathan wuxuu soo jiitay guddiga agaasimayaasha tan iyo markii uu qaatay doorka maamulaha daryeelaha duruufaha adag.
Bandhigyada kooxda iyo natiijooyinkiisa ayaa horumar ka sameeyay mas’uulnimadiisa, iyo xitaa guuldarradeenii ka soo gaartay Queens Park Rangers Sabtidii waxay ahayd soo bandhigid u qalma natiijo wanaagsan.
Markii aan u dhaqaaqno qeyb muhiim ah xilli ciyaareedka, xasilloonida iyo caddeynta ayaa muhiimad weyn u leh qof walba oo kooxda jooga.
Annaga oo taas maskaxda ku hayna, oo aan soo gabagabeynay raadinta ballaaran ee tababare cusub, waxaan aaminsanahay Jonathan inuu yahay murashaxa ugu wanaagsan ee kooxda ku hoggaamin kara 15-ka kulan ee ugu dambeeya xilli ciyaareedka.”
Natiijooyinka ayaa soo fiicnaaday tan iyo markii uu yimid Woodgate, halkaas oo uu ka soo qaaday seddex guul shan kulan, isagoo ku adkeeyay booska Cherries lixda ugu sareysa. Bournemouth waxay rajeyn doontaa inay si toos ah uga soo baxdo Championship-ka si ay uga fogaato ciyaaraha halista ah waxayna kaliya sideed dhibcood ka dambeeyaan booska labaad ee Brentford.
Dhanka Henry, waxay umuuqataa inuu sii ahaan doono madaxa CF Montreal mustaqbalka la arki karo madaama uu u muuqdo inuu dayactirayo sumcadiisa macalinnimo ka dib markii uu si xun u garaacay kooxda Monaco ee 2018 iyo 2019.
Previous articleArteta oo Arsenal ka codsanaya in matin odegaard Safkiisa kasii mid ahaado.
Next articleBarcelona oo bar-bar dhac kala kulantay Kooxda Cadiz